Momba anay - Shenzhen Sihai Packaging Material Co., Ltd.
Fonosana Shenzhen Sihai
Shenzhen Sihai Packaging Material Co., Ltd. dia mpanamboatra vokatra fonosana pp hollow any Shenzhen China, manana 12 taona mahery ao amin'ny takelaka pp izahay, ravina pp hollow, ravina mihosona pp (fantatra koa amin'ny pp corflute pp, sheet coroplast pp , pp hollow board) vokatra fonosana. Pp mitafo fanitso, pp hollow ravin dia fonosana vaovao azo ampiasaina amin'ny karazana indostria rehetra, ny tabilao pp dia fitaovana fonosana azo ovaina azo atao habe, misy endrika sy namboarina famonosana famolavolana vokatra.
Manokana izahay amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny serivisy amin'ny taratasy mitafo, pp hollow sheet, pp boaty, boaty mitafo, pp partition, sign corflute pp, tabilaila fanaovana dokam-barotra, tavoahangy sosona pad, cargos sosona pad ary ny hafa manangona sy mandefa vokatra mihoatra ny 12 taona. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny fonosana, pirinty, fitaovana, boaty famindrana, milina maivana, fivarotam-panafody, famonoana bibikely, doka, haingon-trano, lahatsoratra ara-kolotsaina ary injeniera biolojika.
Ny orinasanay dia manana tsipika famokarana ravin-habaka miisa 3 avo lenta, izay afaka mamokatra tabilao misy poaka pp misy famaritana isan-karazany miaraka amin'ny hatevin'ny 2mm-12mm, ny sakany 2300mm ary ny halavany tsy voafetra, miaraka amin'ny vokatra isam-bolana mihoatra ny 120 taonina.
Ny vokatray lehibe dia ny takelaka poakaty PP, ny loko rehetra sy ny hatevin'ny ravin-koraka pp (ny ravina mihantona), ny sosona pad, ny karatra fizarazarana, ny boaty fiovana ary ny ravina tsy misy valaka, ESD entana entana. Ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, plastika fitaovana, haingon-trano, ravaky ny dokam-barotra, fonosana amin'ny voankazo sy legioma, valizy, kalesin-jaza, kojakoja momba ny fiara, fandefasana vera ary indostria hafa.
Manana ekipa matihanina izahay, fitantanana henjana, fitaovana tena tsara hamoronana vokatra avo lenta. Mpamatsy maharitra ihany koa izahay ho an'ny tarika TCL sy HUAWEI. Manana serivisy OEM sy ODM ihany koa izahay, ny serivisy OEM sy ODM dia mankafy ny mpanjifa. Ny fanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny fanantenan'ny mpanjifa dia fanoloran-tena lehibe amin'ny orinasa Sihai. Omeo anay ny fotoana hanaporofoana ny zavatra azonay atao ho anao amin'ny alàlan'ny fifandraisanao aminay hanoro hevitra anao maimaimpoana.